यी हुन् आजको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरु
By नवीन सन्देश on	 १६ भाद्र २०७३, बिहीबार १७:५१ · समाचार
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भईसकेपछिको पहिलो बैठक आज बसेको छ । बैठकले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लगायत महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले भारतका लागि दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लिलामणी पौड्याल राजदूत सिफारिस गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि उपाध्यायलाई सरकारविरुद्ध काम गरेको भन्दै राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका पौड्यालले यसअघि चीनको ग्वान्जाओमा रहेको महावाणिज्यदुतमा काम गरेका थिए । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैँकका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा डा. श्रीराम पौडेल, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. ऋषि अधिकारी नियुक्त भएका छन्। बैठकले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।